Fanaaniinta Cusub oo Aanan Wadan Magacyada Waalidiintooda Iyo Noqo Fanaan Balse Magaceyga Hasheegan - Layaab” - iftineducation.com
iftineducation.com – Fanaaniinta Da’da yar ee fanka kusoo biiray inta u dhexeyso 2000 ilaa 2012 ayaa la sheegay in ay ogolaansho ka heleen hooyooyinka iyo aabayaasha dhalay fanaaniintaasi balse uu ahaa hishiiska in aan la xusin magaca saxda ah ee aabahaasi dhalay fanaanka heesaha ku luqeynaayo.
Fanaanka ayaa ah mid la baxa magac ka duwan magaciisa saxda ah oo ay ula baxeen waaridkiisa si aabaha fanaankaasi dhalay uu uga bad-baado in lagu dacayadeeyo goobaha lagu qaxweeyo ama lagu xanto in wiilkiisa uu yahay fanaan aan ku heesin erayo roomansi ah oo xigmada ka fog.
Odayaasha dhalay fanaaniinta Cusub ayaa inta badan indhaha ka daawada caruurtooda oo la caweyneyso bulshada gaar ahaan goobaha aroosyada, xafladaha, qalinjabinta, iyo waliba goobaha qarsoon ee loolanka hoose uu ka jiro arintaasina inta badan waxaa ku riyaaqo odayaasha dhalay fanaanintaasi balse shuruudaha ka dhexeeyo odayga iyo wiilkiisa uu yahay in wiilka uunan lamagac bixin magaca aabihiisa.
Arintaani ayaa laga xaqiijiyay Fanaaniin dhowr ah oo intuba kawada siman magac aan ahayn magacooda waxa ayna xaqiijiyeen in arintaasi ay ku qasbeen waridiintii iyaga dhalay maadama aabaha uu ka qajilaayo in magaciisa lagu sheeg sheego goobaha aan munaasabka ahayn.
Ugu danbeyntii waxaa qormadaani daliil kaga filan in aad dib u eegto inta badan fanaaniinta cusub ee u dhexeysa 2000 – 2012 kuwaasoo intooda badan ku labisan magacyo iyaga ka weyn oo aan la garaneynin halka ay kala yimaaden.